Ansixinta baarlamaanka ee xukumadda Soomaaliya oo la soo dhaweeyay - BBC News Somali
Ansixinta baarlamaanka ee xukumadda Soomaaliya oo la soo dhaweeyay
Image caption Wasiirada cusub ayaa la dhaariyay ka dib markii uu baarlamaanku ansixiyay
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa goor dhow si aqlabiyad leh u ansixiyay Xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra'isalwasaaraha Soomaaliya kaddib markii cod loo qaaday.
224 Xildhibaan ayaa ogolaatay in la ansixiyo Xukuumadda, halka 15 Xildhibaan ay diiday, waxaa ka aamusay 2 Xildhibaan, sidaas darteed guddoonka Baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay inay tahay Xukuumadda ansax ah.
Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka C/wali Ibraahim Muudeey ayaa guddoominayay fadhiga lagu ansixyay xukumadda cusub. Waxaana soo xaadiray mudanayaal gaaraya 241, waxaana kulankan sidoo kale fadhiyay Ra'iisal Wasaaraha iyo dhamaan golihiisa Wasiirada.
Golaha cusub ee wasiirada ayaa waxaa isla markiiba goobta ku dhaariyay guddoomiyaha Maxkamadda Sare.
Image caption Ra'iisal Wasaaraha ayaa tilmaamay in xubnahan golaha Wasiirada ee cusub oo ku soo xushay karti, aqoon,
Ra'iisal Wasaaraha ayaa tilmaamay in xubnahan golaha Wasiirada ee cusub oo ku soo xushay karti, aqoon, iyo inuu hubiyay inay u adeegi karaan shacabka sida ugu wanaagsan.
"Waxaan Mudanayaasha Baarlamaanka uga mahadcelinayaa codkii ay I siiyeen markii la I soo magacaabay, waxaana maanta idiinkaga fadhiyaa inaad codka kalsoonida ah siisaan xukuumadeyda oo aan rabo in sida ugu dhaqsaha badan ay uga howlgasho, gaar ahaana qeyb muuqata uga qaadato gargaarka shacabka abaaraha ku dhufteen" ayuu yiri mar uu khudbad u jeedinayay Baarlamaanka.
Mar uu ra'iisalwasaare Kheyre ka hadlay wadahadallada gobolada waqooyi ee maamulka Somaliland ayuu sheegay inuu dadaal gelin doono sidii xal waara looga gaari lahaa wadahadalkaasi isaga oo ballan qaaday inuu tabashada jirta kala hadli doono.